Iwo Akanyanya Kurongeka Mitauro yeLinux Vagadziri | Linux Vakapindwa muropa
Sezvaunoziva, iyo nyaya ya Unix / Linux uye C zvinofambidzana. Iyo Linux kernel yakanyorwa kunyanya mumutauro uyu wepurogiramu, uye zvakatotemerwa kugadzirisa zvikamu zvakanyorwa muunganidziri kuti vazvinyorazve muC uye kuti zvive nyore kune vanogadzira. Ikozvino pane gakava pamusoro pekushandisa Rust (mutauro waMozilla) mune kernel nekuda kwezvikonzero zvekuchengetedza.
Asi zvisinei nezvivindi zvehurongwa hwekushanda, kana uri kuvandudza (kana iwe urikufunga kudzidza mutauro wepurogiramu) uye urikushanda neGNU / Linux distro, zvirokwazvo ungade kuziva kuti ndeapi akanakisa, kana anozivikanwa kwazvo, kugadzira maapplication emapuratifomu aya ...
Zvakanaka, heino runyorwa nemamwe e programming languages zvinonyanya kufadza:
Python: Uyu mutauro wakadudzirwa wave kufarirwa kwazvo mukuvandudzwa kwezvishandiso, vangave maturusi ekuchengetedza kana zvimwewo. Icho chikonzero ndechekuti iwo mutauro wakapusa wekudzidza, une simba, uye kuti une huwandu hwemaraibhurari anonakidza ekushanda nawo.
C ++: ndeimwe yemitauro yekushandisa yakanyanya kushandiswa. Iyo inotungamirwa nechinhu, ine simba, uye imwe yeanonyanyo kuzivikanwa mukushandisa kweLinux, nharaunda yedesktop, nezvimwe. Uye zvakare, kana iwe uri kufunga nezve vhidhiyo yemitambo kuvandudza, ichave zvakare yakanaka sarudzo.
CEhezve, haingori chete hwaro hweLinux kernel uye akawanda akakosha maturusi, ichiripo mune kuwanda kwezvirongwa. Uye zvakare, iyo ndeimwe yemitauro ine simba uye inobvumidza zvirongwa zvakare padanho repasi, iro rakanakira vatongi, mashandiro epamusoro-soro, nezvimwe.
Perl- Uyu mutauro wekunyora uchiri kukosha, kunyangwe uchionekwa senge wakapererwa nenguva nevakawanda. Ndiyo Swiss Army Knife yevagadziri vezvimwe zvinoshandiswa. Nekudaro, iyo inofanirwa kuzivikanwa kuti zvishoma nezvishoma iri kutsiviwa naRuby, PHP kana Python.
Java: ndeimwe yemitauro inonyanya kushandiswa, sezvo iri multiplatform. Uye zvakare, iri zvakare zano rakanaka kana uchironga kugadzira yeApple. Iyo inoshandiswa kune ese marudzi esoftware, kubva kune zvinoshandiswa, kumitambo senge Minecraft, saka iri kuita zvakasiyana-siyana.
Go: Mutauro weGoogle uri kuwanawo mafeni. Iyo yatove yakashandiswa kune akawanda akakosha mapurojekiti. Zviri nyore kudzidza, zvekushandisa zvakanyanya, ine C-senge syntax, zvirongwa zvayo zvinomhanya uye zvinomhanya zvakanyanya. Iyo ine yakazara yakajairwa raibhurari iyo inowedzeredzwa neyechitatu-bato maraibhurari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Iyo yakanyanya kunaka mitauro mitauro yeLinux vagadziri
Nguva pfupi yadarika ndiri kubheja paGo, kutsiva C / C ++ uye dzimwe nguva Python, sezvo kunyangwe ndichiishandisa zuva nezuva, zvakadaro hazvishande kwandiri kushandisa induction kumisikidza zvivakwa.
Denda Inc.: Mushonga Unobatsira WHO Kuchengeta Vashandisi Vakachengeteka